अष्ट्रेलिया छाेडेर बाख्रा पालन भव्य आम्दानी ! एक पटक पढेर शेयर गर्नुस्।:: Mero Desh
अष्ट्रेलिया छाेडेर बाख्रा पालन भव्य आम्दानी ! एक पटक पढेर शेयर गर्नुस्।
Published on: २८ असार २०७८, सोमबार ०३:५६
अष्ट्रेलिया छाेडेर बाख्रा पालन गरेका व्यक्तिको अहिले भव्य आम्दानी ! एक पढक पढेर शेयर गर्नुस्। धेरैको लागि प्रेरणा हुन सक्छ युवापुस्ताको कृषिमा आकर्षण।
गलेश्वर : आफ्नै गाउँठाउँमा उद्यम गरी म्याग्दीका कृष्ण मल्लले मनग्य आम्दानी गर्न सफल भएका छन्। बेनी नगरपालिका–६ चुत्रेनीका २९ वर्षीय मल्लले पैसा कमाउनकै लागि अष्ट्रेलिया जाने तयारीलाई पन्छाएर गाउँमा नै शुरु गरेको बाख्रापालनबाट अहिले वार्षिक रु १२
लाखसम्म आम्दानी गर्न सफल भएका हुन्। उनले करिब ६ वर्ष खाडी मुलुकमा विताएर तीन वर्ष अघि स्वदेश फर्किए।
बाख्रा र बोका बिक्रीबाट वार्षिक रु २० लाखसम्म कमाइ गर्ने लक्ष्य छ। उनको फार्ममा तीन लाखसम्म पर्ने बोयर बोका छन्।यहाँको कमाईले पूर्णरुपमा सन्तुष्ट छु आम्दानी लाई दोब्बर बनाउने गरी थप खोर विस्तार गदैंछु’’,नेपाल व्यावसायिक बाख्रापालन महासंघ म्याग्दीका अध्यक्ष समेत रहेका मल्लले भने।